“ ကွဲပြားခြားနားမှုတွေကိုမှ ကြိုက်တဲ့ သူတွေအတွက် ထောက်ကြန့်နားက မြို့ပြရပ်ဝန်း ကော်ဖီဆိုင်များနဲ့ ဆန့်ကျင်သွားတဲ့ ဆိုင်လေး” ⛾⛾🌷🌷 – YANGON STYLE
“ ကွဲပြားခြားနားမှုတွေကိုမှ ကြိုက်တဲ့ သူတွေအတွက် ထောက်ကြန့်နားက မြို့ပြရပ်ဝန်း ကော်ဖီဆိုင်များနဲ့ ဆန့်ကျင်သွားတဲ့ ဆိုင်လေး” ⛾⛾🌷🌷
ရန်ကုန်မြို့နဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့ ထောက်ကြန့်နားက ကော်ဖီဆိုင်လေး “ TM” ကို ရောက်ပြီးပြီလားဗျ..😍
⛾ထောက်ကြန့်ဘက်မှာ ဒီလိုဆိုင်လေးတွေ သိပ်မရှိဘူးဗျ..ဒီဆိုင်လေးကတော့ မြို့ပြရဲ့ ကော်ဖီဆိုင် ပြင်ဆင်တာလေးတွေထက် ပိုသာပြီး ၃ထပ်ရှိတာပဲဗျ.. ပြီးတော့ မြို့ထဲမှာ ထိုင်ရတာ ငြီးငွေ့နေသူတွေ၊ Ro ချင်တဲ့ သူတွေ၊ အေးအေးဆေးဆေးနေချင်သူတွေနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တဲ့သူတွေ လာသင့်တဲ့ ဆိုင်လေးဗျ….
⛾…ဆိုင်က ကားမှတ်တိုင်ကနေ လမ်းလျှောက်ဝင်လာလို့ရသလို ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီ ငှားလို့လည်း ရတယ်ဗျ ..စစ်သင်္ချိုင်းဘေးလမ်းကနေ ပိုက်လုံးအကျော်လေးမှာပါ…ကျွန်တော်ကတော့ လမ်းလျှောက်ဝင်စေချင်တယ်😉 ရန်ကုန်မြို့မှာ ကော်ဖီဆိုင်တွေ ပတ်ထိုင်ဖူးတဲ့ သူတွေတောင် လမ်းလျှောက်ရတဲ့အရသာလေးကို တွေ့သွားမှာ အမှန်ပဲဗျ / လမ်းဘေးဝဲယာမှာ သစ်ပင်လေးတွေနဲ့ ပြီးတော့ ဆိုင်တန်းလေးတွေ တော်တော်များများ တွေ့ရတယ်ဗျ အကြော်စုံ၊ လမ်းသရဲမုန့်၊ ဝက်ဆီဖတ်ကြော်၊ ဘိန်းမုန့်ဆိုင်တွေနဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေ စတိုးဆိုင်တွေနဲ့ အစုံပဲဗျ လမ်းလျှောက်သွားစေချင်ပါတယ် ဆိုင်လေးရောက်ရင်တော့ လာရကြိုး နပ်သွားစေရမယ်ဗျာ…
📆Mon to fri ကတော့ လူရှင်းတယ်ဗျ sat sunကတော့ လူနည်းနည်းကျတယ်။ ဒါပေမဲ့ နေရာထိုင်ခင်းများတော့ အချိန်မရွေးလာလို့ရတယ် ကျွန်တော်ကတော့ ရုံးဖွင့်ရက် ရောက်ဖူးသလို ရုံးပိတ်ရက်လည်း ရောက်ဖူးတယ်ဗျ ဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေကလည်း သဘောကောင်းတယ် ဆိုင်လေး ဘယ်လောက်မိုက်လဲဆိုတာ ပုံလေးတွေသာ ရှိုးလိုက်တော့ဗျာ..
⛾Price rate ကတော့ ၇၀ဝကျပ်ကနေ စပြီး ၂၀ဝ၀ကျပ်က အများဆုံးဆိုတော့ တော်တော် အဆင်ပြေတာပဲ..💰
⛾သူ့ရဲ့ Trademark ကတော့ နို့နှင့် ပတ်သက်တာလို့ ဆိုနိုင်ပြီး ကော်ဖီနှင့် နွားနို့စစ်စစ်သောက်ရမယ်ဗျာ.. နွားနို့ဗူးလေးတွေလည်း ရတယ်ဗျ..💯
⛾Menu Topic တွေကတော့ Main drink & desserts/ Milk Shakes/ Milk Tea/ Coffee & Tea/ Smoothies/ Juice & Soda တွေ ရနိုင်တယ်ဗျ..
🚘ကားနဲ့လာလည်း ကားပါကင်အတွက် ဆိုင်ရှေ့မှာ နေရာတော်တော် ကျယ်တယ်ဗျ..
ဆိုင်ကလည်းဖွင့်ထားတာ မကြာသေးသလို ဆိုင်ခွဲကိုလည်း လှည်းကူးနားမှာ အသစ်ထပ်ဖွင့်လှစ်ထားသေးတယ်ဗျ
📌လမ်းသစ်မှတ်တိုင်၊ စစ်သင်္ချိုင်းဘေးလမ်းကနေ ဝင်သွားပြီး ပိုက်လုံးအကျော်လေးမှာပါ😊
“ TM Milk & Bakery”
No.3/412, Myanandar Road, Htauk Kyant, Mingalardon Tsp.Yangon, Myanmar.
Ph no : 09966366481
No.(282),no-1Yangon-Mandalay Hwy, Hlegu.
Ph no : 446058522
#TM Milk & Bakery
Ice Green Milk Tea & Cappuccino
ကော်ဖီသောက်ရင်း သီချင်းနားထောင်ရတာ ဘယ်လောက် အရသာရှိလဲ😱😱
Jamနှစ်လွှာ Sandwish & TM နို့ပေါင်းလက်ဖက်ရည်
ဒုတိယထပ်ကနေ မြင်ရတဲ့ View လေး😃
စာအုပ်လေးတွေလည်း ယူဖတ်လို့ရသလို Decoration လှလှလေးတွေနဲ့လည်း ဓာတ်ဖမ်းလို့ရ
စရောက်တာနဲ့ အောက်ထပ်မှာတင် ဓာတ် စဖမ်းလို့ရနေပြီ😊
TM Milk (450ml)တဲ့ အိမ်ကိုလည်း ဝယ်သွားလို့ရတဲ့ ဗူးလေးတွေ
Ph no : 09-446058511